LA OGAADAY: Sababtii Dhabta Ahayd Ee Liverpool & Man United Uga Baxeen Xiisihii Aaron Ramsey Oo La Ogaaday Iyo Juventus Oo Ka Faa'iidaysatay. - Gool24.Net
LA OGAADAY: Sababtii Dhabta Ahayd Ee Liverpool & Man United Uga Baxeen Xiisihii Aaron Ramsey Oo La Ogaaday Iyo Juventus Oo Ka Faa’iidaysatay.
Xidiga xulka qaranka Wales ee Aaron Ramsey ayaa xalay kooxda Juventus si rasmi ah qalinka ugu duugay heshiis afar sanadood ah kaas oo uu todobaadkii ku qaadan doono 400,000 kun oo gini laakiin waxa uu warkan soo gaba gabeeyay xiisihii kooxaha Yurub ugu waa wayn uu Ramsey ka helayay waxaana adeegiisa ku guulaysatay Juventus.
Kooxaha Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United, Paris St Germain iyo Bayern Munich ayaa dhamaantood ka mid ahaa kooxihii xiisaynayay saxiixa Aaron Ramsey ee doonayay in ay uga faa’iidaystan in si xor ah ay ku heli kareen laakiin Juventus ayaa dhamaan kooxaha ku garaacay saxiia Ramsey.
Laakiin waxaa hadda la ogaaday sababtii ay kooxaha Manchester United iyo Liverpool uga hadheen baacsashadii ay Aaron Ramsey ku doonayeen in ay si xor ah kula soo wareegaan dhaaadka xili ciyaareedkan waxayna arintan Juventus ka caawisay in ay si sahlan ugu guulaysatay adeega Aaron Ramsey.
Wargayska London Evening Standard ayaa shaaciyay in sababtii ay Liverpool iyo Man United uga baxeen xiisihii Aaron Ramsey ay ahayd dalabkii mushaarka qaaliga ah ee uu doonayay in uu ku shaqeeyo marka uu si xor ah kaga baxo Arsenal.
Man United ayaa hore dhibaato uga soo aragtay heshiiskii ay Alexis Sanchez kaga dhigtay ciyaartoyga Premier league ugu mushaarka qaalisan, waxayna markan ka taxadareen in ay Aaron Ramsey ka dhigaan xidiga labaad ee kooxooda ugu mushaarka badan iyada oo markii hore ay la dhibtoonayaan xalinta dhibaatada Sanchez.
In Aaron Ramsey uu hadda Juventus todobaadkii ka qaadan doono 400,000 kun oo gini waxay la micno tahay in Juventus ay ka fikirtay qiimihii ay ciyaartoy Aaron Ramsey oo kale ah ku heli lahayd, sidaa daraadeed, maadaama oo uu si xor ah ugu imanayo in ay mushaarkiisa qaaliga ah ee afarta sanadood noqon karaan lacag ka yar intii ay ciyaartoy khadka dhexe ah oo tayo sare leh kula soo wareegi lahayd.
Liverpool ayaa markii hore la filayay in ay qaabkii Chamberlain kula soo wareegi kartay Aaron Ramsey balse mushaarka xad dhaafka ah ee uu xidiga reer Wales dalbanayay ayaa Liverpool ka hor joogsaday in ay si xor ah ku hesho Aaron Ramsey.
Ma aha markii ugu horaysay ee koox Premier league ahi ay ciyaartoy muhiim ah ku diiday mushaar waali ah oo uu dalbaday, balse Manchester City ayaa hore Alexis Sanchez oo ay heshiis la gaadhay waxay uga baxeen in kala sarayn dhaqaale uu qolka labis kooxooda ka abuurayo taas oo markii danbe si buuxda loogu amaanay.
Si kastaba ha ahaatee, Aaron Ramsey ayaa mushaar waali ah ka qaadan doona kooxda Juventus taas oo siinaysa fursad uu kaga ciyaaro horyaalka Serie A isaga oo waliba ka garab safan doona Cristaino Ronaldo xili ciyaareedka soo socda.